Labo Dhacdo Oo Layaableh Oo Maanta Kadhacay Muqdisho | Ilwareed.com Isha wararka iyo warbixinada Somalida oo dhan, iyo dhacdooyinka caalamka
HomeWararkaWaraysiyo & B/naamijyociyaaroMaxaa CusubmurtiDiintaContact Us	Search for:
Labo Dhacdo Oo Layaableh Oo Maanta Kadhacay Muqdisho
Posted By ilwareed on Friday, November 23rd 2012 16:58 EAT
Dhacdooyin layaab leh ayaa waxa ay maanta ka dheceyn magaalada Muqdisho ee Caasimada Dalka Soomaaliya taas oo layaab iyo fajac ku noqotay dadkii maqlay waxaana ay labo dhacdo oo naxdin leh.
Mida hore ayaa waxa ay ka dhacday maanta Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir taas oo aheyd markii haweeyney ay seygeeda kajartay fooda hore ee malabyarowgiisa taas oo sababtay in uu kuyimaado dhiig bax saa’id ah oo ugu dambeentii keentay in loola cararo Isbitaal.
Ninkaan laga jaray malabyarowgiisa ayaa waxaa la sheegay in ay haweyneedaan uu qabay xilliga ay kajareysay ay siisay kaniini taas oo ay ugu dartay shah uu cabaayay markii uu miir daboolmayna ay ka jartay malabyarowgiisa.
Ninkaan oo ka sheekeeyay qaabka looga jaray malabyarowgiisa ayaa waxa uu sheegay in mar qura uu kawarhelay iyadoo qeyb kamid ah jirkiisa dhulka yaalo oo uu dhiig badana kabaxay xaaskeygana ay mindi ila dhutaagneed ayuu yiri.
Ninkaan ayaa waxaa la sheegay in ay tahay sababta ay xaaskiisa uga jartay malabyarowgiisa in uu la guursaday naagkale taas oo uu ka dhalay illaa caruur gaaraya lix oo ayna war kaheyn xaaskiisa taas oo ogaatay markii dambe in uu leeyahay xaaskale iyo caruur.
Haweyneeyda markii ay ku kacday falkaan ayaa waxaa la sheegay in ay goobta ka baxsatay iyadoon aan la ogeyn ilaa iyo haatan mesha ay jaan iyo cirib dhigtayba waxaana la sheegay in maser dartiis ay ninkeeda kaga jartay malabyarowgiisa.
Dhinaca kale waxaa haweyney kale ay iydana maanta ninkeeda ay ku shubtay biyo kulul maser dartiisa, waxaana soogaaray seygeeda gubasho badan oo dhan waliba ka soogaaray.
Dhacdada ugu weyn ee hada la hadal haayo waa mida ka dhacday degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir taas oo ay aheyd markii ay haweyney ay ninkeeda ka jartay afka hore ee malabyarowgiisa taas oo uu haatan la xanuun sanyahay oo uu Isbitaal uu ugu galay.
Qalid.kambala says:	December 13, 2012 at 7:35 am	Xaaax,xasid,sana,mala,iska,jara?
Reply	Xuseen says:	November 29, 2012 at 5:34 am	Waa caqiido dro walahi waxaayokle
Jose Mourinho: Real madrid ayaa weli ah kooxdeyda Spain April 22nd 2014
Jurgen Klopp oo sidoo kale diirada u saaran Man United April 22nd 2014
Van gaal oo sugaya shaqada man United Iyadoo ay soo dhow dahay in la Ceyriyo david Moyes. April 22nd 2014
Hordhac: Atletico Madrid v Chelsea – Simieone iyo mourinho oo Semi-finalka Champions League isku Arkaya April 22nd 2014
Liiska dhameystay ee rikooryada uu jabiyay Moyes intii uu Man United Macalin u ahaa April 21st 2014
Jurgen Klopp: kuma biirayo barca, waan jeclahay dortmund April 21st 2014
Boliiska oo baaraya fadeexad la xiriirta isticmaalka daroogada cocaine oo ka dhacday koox weyn oo England Ah April 21st 2014
Sawirro:-Liverpool oo dhaw in ay horyaalka BPL qaaday ka dib guushii galabta April 21st 2014